म्याग्दीमा चमत्कार! मुटुको चाल बन्द भै सकेको बिरामीलाई यसरी बचाए डाक्टरले (भिडियो सहित) | भिडियो
June 4, 2021 NepstokLeaveaComment on म्याग्दीमा चमत्कार! मुटुको चाल बन्द भै सकेको बिरामीलाई यसरी बचाए डाक्टरले (भिडियो सहित)
म्याग्दीको बेनीमा चमात्कार भएको छ । मुटुको चाल बन्द भैसकेको विरामीको ज्यान डाक्टरले बचाएका छन् । ती बिरामी खुट्टामा घाउ भएपछि बेनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनको उपचारकै क्रममा अकस्मात मुटुको चाल बन्द भयो ।
बेनी नगरपालिका–६,डम्बराका ५५ बर्षिय ती मधुमेहका बिरामीको मुटुको चाल अचानक बन्द भएको थियो । विगत १० दिनदेखि अस्पतालमा उपचारार्थ उनको मधुमेहकै कारण खुट्टा बिग्रेपछि शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको थियो ।
नियमित चेकजाँचको क्रममा डा. नवराज बस्ताकोटीले बिरामीको मुटुको चाल अचानक बन्द भएको देखेपछि स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा करिब ८ मिनेट सिपिआरको माध्यमबाट काम गर्न छोडेको मुटुलाई जगाउन सफल हुनुभयो ।
दोस्रोपटक करिब ३० सेकेण्ड मुटुको चाल बन्द भएपछि डा. बस्ताकोटी, डा. डालिम काफ्ले सहित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले १६ मिनेट सिपिआर विधिबाट पुनः होस फर्काउने कार्यमा सफलता मिल्यो ।